Ihe nkuzi ise na otu nnukwu ihe nzuzo banyere ịde blọgụ ngwa ngwa | Martech Zone
Monday, August 24, 2009 Sunday, October 4, 2015 Robby Ogbugbu
Akwụkwọ mpịakọta narị afọ nke 19
Mgbasa ozi ahịa na-aga nke ọma nwere ike gbasaa dị iche iche, nwee ozi dị iche iche, ma ọ bụ lekwasịrị anya n'ebe ndị mmadụ dị iche iche nọ, mana ha niile nwere otu ihe: ha aghaghi ibu oso. Nanị ụzọ ị ga-esi na-asọmpi bụ ịmepụta mkpọsa gị ngwa ngwa ma nweta ngwaahịa ahịa nye ndị ahịa nke ọma. Were ogologo na ahia ahia gi bu mkpofu.
Mgbe ị na-ewepụta ọdịnaya blọọgụ, windo ahụ dịwanye ike. Ihe omume Internetntanetị nwere ike ịmalite oge niile awa ole na ole. Ọ bụrụ Douglas Karr adabaghị ozugbo Brody PR fiasco, agaraghị enwe isi dị ukwuu n'ịtụle isiokwu a Martech Zone. Omume: blogger dị irè ga-anabata ma rụpụta ọrụ.
Na blogINDIANA 2009, egosiri m nnọkọ na Arụpụtaghị na ịde blọgụ. Okwu ahụ malitere site na nkuzi ise dị mkpa onye ọ bụla na-ede blọgụ ga-amụta:
Fọrọ nke nta ka onye ọ bụla kwụsị ịde blọgụ. Dị ka New York Times a na-agbahapụ 95% nke blọọgụ niile. Nke a bụ nnukwu ihe na - egosi na arụpụtaghị ọrụ na - egbu blọgụ.
Blọọgụ dị ịtụnanya na-agachikwa anya. All blọọgụ ukwu, ma ọ bụrụ na ha ewu ewu ma ọ bụ na-eme nke ọma na niche, dị emelitere oge.
Ogo adịghị mkpa. Ndị na-ede blọgụ na-arụ ụka mgbe niile ma ụtọasụsụ na nsụpe na-ekwu n'ezie, ma na-arụtụ aka na ọtụtụ blọọgụ azụmaahịa na-esi isi.
Ihe kacha ọhụrụ na-enweta mmeri. Ngwunye ọrụ na ndị ọrụ na-elebara ihe ị dere taa anya karịa ihe ị dere ụnyaahụ.
Anyị niile bụ ihe efu. Edere ọ bụla blog post ma mee ka ọha na eze mara ka ndị ọzọ nwee ike ịgụ ya. Nabata na anyị na-ede n'ihi na anyị chọrọ ka agụ okwu anyị dị mkpa maka ịde blọgụ.
Ihe omuma ndi a na - eduga na nkwubi okwu doro anya, ma di nkpa. Ọ bụrụ na ọ fọrọ nke nta ka mmadụ niile kwụsị ịde blọgụ, karịa ka ị ga - emeri site na ikpebi ịghara ịkwụsị! Ọ bụrụ na ndị na-ede blọgụ dị ukwuu na-ebipụta oge na-agbanwe agbanwe, karịa ị nwere ike isonyere ọkwa ha site na ịme otu ihe ahụ. Agbanyeghị, enwere otu nnukwu ihe nzuzo na ịde blọgụ ngwa ngwa. Chepụta usoro maka ịde blọgụ.
Enweghị ndị na-ede blọgụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ abụọ ga-enwe otu usoro maka ịde blọgụ, dịka ọ nweghị mkpọsa ahịa abụọ ga-adị otu. Mana enwere ọtụtụ ihe dị mkpa ịtụle:
Ihe njirimara posts: Na Mgbasa Ogbugbu, anyị nwere ụzọ ise dị iche iche: a nzaghachi gaa na blọọgụ ọzọ, ederede akụkọ ma ọ bụ ederede ederede, a nchịkọta nke ihe omume anyị na-akwado ma ọ bụ na-aga, a n'ihu nke a post blog post, a pụrụ iche n'ọnọdụ na obere ihe omuma ma obu okwu kwa ubochi, ma obu mara ọkwa nke omume na-abịanụ ma ọ bụ omume a chọrọ. Ide blọgụ pụtara iburu otu n'ime edemede ise ndị a, nke na-ewepụta blogger na ahịhịa nke amaghị ihe ọ ga-ede. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịtụgharị edemede ahụ iji hụ na ị naghị emeghachi onwe gị nke ukwuu.
Usoro ihe omume na igbochi: Gingde blọgụ kwesiri ịbụ mkparịta ụka. Ọ bụrụ na ị na-etinye ọtụtụ awa na awa iji mepụta paragraf ọ bụla, ọ ga-abụ na ị gaghị enwe isi. Kama, gbalịa ma hazie oge ịde blọgụ gị tupu oge eruo ma belata onwe gị karịa 60 nkeji na otu oge.
Nkewa site na ọrụ: Usoro nke ide a blog dị iche iche karịa edezi a blog. N'otu aka ahụ, ịmepụta echiche na ọbụna ịmepụta “kalenda ederede” gị chọrọ akụkụ dị iche nke ụbụrụ gị. Ọ bụrụ na nzukọ gị buru oke ibu, gbalịa ikenye ndị ọ bụla ọrụ ndị a dị iche iche. Y’oburu na ibu Blogger, choo onye gi na ya ga agba ahia. Ọ dị mfe karịa idezi mmadụ ọzọ rụọ ọrụ, ma na-akasi gị obi ịmara na onye ndụmọdụ a tụkwasịrị obi ga na-enyocha okwu gị tupu e bipụta ya.
Oge wee mechie nnọkọ ahụ a dimkpa ngosi. Mgbe anyị rịọchara echiche sitere na ndị na-ege ntị ma were ndị ọrụ afọ ofufo dezie, anyị mepụtara post blog zuru ezu na 575 sekọnd. Nke a bụ ihe akaebe na-enweghị mgbagha na ị nwere ike blog ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị nwere usoro. Lelee ihe ngosi mmịfe (njikọ kpọmkwem):
Maka ozi ndị ọzọ gbasara ịmepụta usoro ịde blọgụ maka gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị, kọntaktị Mmepe nke Uzu taa!
Tags: ịde blọgụịde blọgụ ọsọ ọsọ
Aug 24, 2009 na 11:52 PM
Ahụrụ m otu ahịrị n'anya, Robby… "blogtụle blọọgụ bụ mgbe niile." Fọdụ folks na-etinye oge dị ukwuu na-anwa ime ka blọọgụ ha dị egwu na ha na-efunahụ isi okwu nke blog iji gosipụta mmadụ niile ntụpọ nke ndụ anyị na ọrụ anyị kwa ụbọchị. Anyị chọrọ ịnụ banyere mmejọ, ọbụnadị ọdịda.
Aug 24, 2009 na 9:34 PM
Ihe ndị a niile bụ ezigbo mma, mana ọ bụghị naanị ụzọ ịme ihe.
Agaghị m eji blọọgụ m, ebe m ga - ewere 1, 2 ma ọ bụ karịa karịa ụbọchị ụfọdụ na - achọ ihe ọmụma teknụzụ miri emi iji dee. Agbanyeghi na ederede di otua bu uzo di nkpa banyere otu m si egosi na m kwesiri ntukwasi obi nke onwe, adighi m enweta uzo zuru oke iji gosiputa ihe m kwuru. O nwere ike gosiputara ihe ị kwuru kama…
Mana blọgụ Steve Pavlina gosipụtara ihe m kwuru. Steve dee oke blog posts. Ọ na-emebi iwu ọ bụla m gụrụ gbasara mgbasa ozi blog. Ọ na-enweta ọtụtụ okporo ụzọ ọ ga-esi kwuo okwu ozugbo na nnọkọ.
Echere m na ọ na-agbadata n'ike onye na-ede blọgụ na-eweta na ederede ya. Followinggbaso "iwu" na ike dị ala, ederede blọọgụ na-enweghị isi na-egosi m na ọ bụ ụzọ ntụgharị maka ọdịda. Imebi iwu na ike dị elu, ọdịnaya dị elu dị elu yiri ka ọ ga-aga nke ọma.
Aga m eme ka obere mkpirisi dị mfe karịa karịa ederede toro ogologo. Enwere ike ọ bụ nke a kpatara na ọtụtụ ndị na - ede mkpụmkpụ karịa ogologo oge.